TTSweet: ယနေ့မနက်စာ ဆီထမင်း မန္တလေးပဲကြော်
Posted by T T Sweet at 12:51 PM
ကြည်မြန်မာ September 28, 2011 at 1:15 PM
တီချွိကလည်း ချိတ်ကြီးလိုက်တာ..။ အနော်က ချားချင်နေပေါ့..။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..။ ကဲ..။
ဒီတစ်ခါအရေးအသားက ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ မနောမယထမင်းဝိုင်းအရေးအသား ခင်ဗျ..။ တီချွိ ပိုပိုတော်လာပြီ..။ ချာကြီး ရွှေဥဒေါင်းလိုရော..၊ ချာကြီး မင်းသိင်္ခလိုရော ရေးတတ်လာပြီ..။ ဟိဟိ..။
T T Sweet September 28, 2011 at 1:24 PM
ဂျပယ်မ တွေ့မှ အကြွေးရှင်တွေ့သလို သတိရတယ်။ ထမင်းသုတ်အကြောင်းမေးထားတာ အရင်သုတ်တုံးက ပုံလေးတွေ ရိုက်ထားတာရှိတယ်။ အဲဒီ လှည်းတန်းထမင်းသုတ် တော့ မစားဖူးလို့။ တီဆွိ သုတ်တတ်သလို သုတ်ထားတာ။ နောက်ကျရင် တင်ပေးမယ်နော်။
ကြည်မြန်မာ September 28, 2011 at 1:29 PM
၀ုတ်တဲ့ ကျေးဂျူး တီချွိ
Naychi September 28, 2011 at 2:23 PM
ခုနက လာကြည့်တုန်းကဆီထမင်းမရှိသေးပါဘူး :) ခုပြန်လာစားသွားပီ..ကောင်းလိုက်တာတီဆွိရေ … :)
seesein September 28, 2011 at 2:29 PM
သြ......နှိပ်စက်ပါပေ့ တီတီဆွီရေ.......မန်းမှာနေပြီး မစားဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီ...စစလဲ စိတ်ကြီးတယ် ခဏနေ သွားဝယ်စားမယ်ဗျို့
ဒီတခါတော့ ဂျူးဂျူးလေး မပါဘူးလား...
ဆီထမင်းရော ပဲကြော်ရော ကောင်းမယ့်ပုံလေး။ မစားရတာကြာပေါ့ တီတီဆွိရေ........။ ဂျူးဂျူးလေးကရော မစားဘူးလား။
T T Sweet September 28, 2011 at 2:55 PM
လီယို ဂျူဂျူးက အရမ်းချေးများတယ်။ မြန်မာ အစားအသောက် တော်တော်များများ သူမစားဘူး။ သူ့အတွက် အမြဲသတ်သတ်လုပ်ပေးရတယ်။ ဒီနေ့မနက် သူ့အတွက် ပန်ကိတ် (ဂျုံ ကြက်ဥကြော်) လုပ်ပေးရတယ်။
စစ မန်းလေးပဲကြော်ပြောတာလား။ ငယ်ငယ်က ထမင်းဖြူလေးဆီဆမ်း၊ မန်းလေးပဲကြော်လေးနဲ့ မနက်စာစားရတာ အရမ်းကြိုက်တာ။ ဒီမှာတော့ ဘာမှ ၀ယ်မရတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ လုပ်စားရတယ် စစရေ။ မုန့်ဗိုင်းထောင့်လေးစားချင်လို့ ရရင် ၀ယ်ခဲ့နော် ...း)
နေခြည် ဦးခြိမ့်ကလဲ ဆီထမင်း အရမ်းကာင်းတယ် ပြောသွားတယ်။ အရင်တစ်ခါလုပ်တာ rice cooker နဲ့ ချက်လိုက်တာ ရေများပြီး ပျက်သွားဖူးတယ်။
ခေးကို September 28, 2011 at 3:43 PM
တီဆွိ ရက်စက်တယ်. ကောက်ညှင်းပဲကြော် စားချင်နေတာ စိတ်မကြီးတော့ ခုထိမစားရသေးဘူး ဟင့်
Phomu September 28, 2011 at 3:58 PM
မန်းလေးပဲကြော်နည်း မှတ်သွားတယ် ကျေးဇူးဘဲအမ
အစားသောက်ပို့စ်တွေတင်တဲ့ ဘလော့ဂါတွေကိုသိပ်မကျေနပ်ဖူးး)
Anonymous September 28, 2011 at 5:11 PM
အမ..ကောက်ညှင်းမှုန့်ကို အီးလို ဘယ်လိုခေါ်လဲလို့ ပြောပြပေးပါနော်...။ကြော်စားချင်လို့ပါ..။
susu September 28, 2011 at 6:07 PM
Cameron September 28, 2011 at 6:19 PM
mstint September 28, 2011 at 9:42 PM
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ စွိတီရေ မနက်ကအိမ်မှာလည်း ဆီထမင်းထိုးစားတယ် နှမ်းထောင်းနဲ့ပဲစားခဲ့တာ။
စွိတီရဲ့ မန္တလေးပဲကြော် နောက်တစ်ခေါက်လုပ်စားမယ်။
T T Sweet September 28, 2011 at 10:11 PM
ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်တီတင့်ရေ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နော်။ မနက်က နှမ်းထောင်းလေးထည့်ဖို့တောင် မေ့သွားတယ်။
မိုးငွေ့၊ ခေးကို လုပ်ရတာ သိပ်မခက်ပါဘူး။ လုပ်စားကြည့်လေ။
မစု ညက်ခုံးမွှေးက မနက်တိုင်းဆွဲရတာ ... ကိုယ့်အိမ်ကလူ မမှတ်မိမှာစိုးလို့ ...း) နောက်တာပါ။ ညက်ခုံးမွှေးမပါရင် ဘယ်လိုမှ ကြည့်မကောင်းလို့ ဆွဲနေရတာပါ။ ဆီထမင်းတော့ စားသာသွားပါတော့။
အနောနိမတ်စ် ကောက်ညှင်းမှုန့်ကို glutinous rice flour ခေါ်ပါသဗျာ။
အော် ဒုက္ခ မောင်ဘကြိုင်တို့ ၀ဋ်လဲ မသေးဘူးနော်၊ ဒီဘလော်ဂါတွေ တော်တော်ဆိုးး)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 29, 2011 at 12:02 AM
ဝါး.. ဆီထမင်းက မိုက်လိုက်တာ အထူးသဖြင့် ဂျိုးတွေပေါ့ ။။ ပုံကြည့်ပြီး ခွာစားချင်စိတ်တွေပေါက်လာမိတယ်။ ငါးခြောက်ဖုတ်ဆီဆမ်းလေးနဲ့ စားလိုက်ရရင် ဆွေမျိုးမေ့လေမလားဘဲနော်း)
Pancake လုပ်နည်းလေး တင်ပါလား ဆွိရေ
ဆွိက ပုံတွေနဲ. အတိုင်းအတာ အသေအချာနဲ.ရေးပေးတတ်လို.ပါ။ ကျေးဇူးနော်။
T T Sweet September 29, 2011 at 5:52 AM
ပန်ကိတ်လုပ်နည်း အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရင် တင်ပေးပါ့မယ်။ ပြောသာပြောသာ အန်တီဆွိမှာ ဟင်းချက်နည်း အကြွေးတွေ အများကြီးပဲ တင်ဖို့ရာ။ နောက်ဆို တစ်နေ့ ၂ပို့စ်တင်ရမယ်နဲ့တူတယ်။
ချောရေ ငါးခြောက်ဖုတ်က oven နဲ့ ဖုတ်ရတာဆိုတော့ ကြာလို့ မနက်က ပဲကတ်ကြော်လေးပဲ ကမန်းကတမ်းကြော်လိုက်တာ။ ဟုတ်တယ် ငါးခြောက်ဖုတ်နဲ့ဆို ပိုကောင်းမယ်။ နောက်တစ်ခါ စိတ်ထပ်ကြီးလိုက်ဦးမယ်နော်။း)
သက်ဝေ September 29, 2011 at 12:48 PM
ကော်မန့် ပေးလို့မရတာ ကြာပြီ...း(
သက်ဝေ September 29, 2011 at 12:50 PM
အဲ... ရသွားပဟ...း))
တီဆွိရေ... ဘလော့ဂ်မှာ ကော်မန့်ပေးတာ မရဘူး..
ဧရာဝတီ ပိုစ့်မှာထဲက...း(
ရေးပြီး publish လုပ်လိုက်ရင် ပျောက်ပျောက်သွားတယ်...
သူများတွေတော့ ပေးလို့ရနေတာ တွေ့ရတယ်... (ဝမ်းနည်းလိုက်တာ...)
မန္တလေး ပဲကြော်မှာ နှစ်အချိုး တစ်ဆိုတာ ပဲ နှစ် ကောက်ညှင်း တစ်လားလို့လည်း မေးချင်လို့ပါ... မေမေတို့ကို ကြော်ပေးချင်လို့...း)
T T Sweet September 29, 2011 at 12:58 PM
အန်တီသက်ဝေ ...facebook မှာတွေ့တယ်။ ခုလေးတင်ပဲ စမ်းကြည့်ပြီး ပြန်ဖြေမလို့ဟာ။ ခုတော့ရသွားပြီဆိုတော့ ပေးတော့ ကွန့်မန့်တွေး)
ပဲ ၂းကောက်ညှင်းမှုန့် ၁ ညမလေး အဖြေမှန်ပါတယ်ကွယ်။ အဲလေ အန်တီ့အဖြေ မှန်ပါတယ်ကွယ် ...း)
သက်ဝေ September 29, 2011 at 1:01 PM
ကျေးဇူး သူငယ်ချင်း... ဒီတပတ်တော့ ကိုယ့်ကို မတားနဲ့တော့... ကြော်စားပြီပဲ...း))
Vista September 29, 2011 at 1:33 PM
မန်းလေးပဲကြော်ကတော့ အကြိုက်ဆုံး .. ဆီထမင်းကတော့ ကောက်ညှင်းမကြိုက်လို့ မလုပ်စားဖစ်ဘူး
Mo September 29, 2011 at 1:33 PM
U Chaint, you are lucky enough to have suchagood house wife.
You should massage her whenever you get home from the office :)))
TZH1985 September 29, 2011 at 4:01 PM
မန်းလေးပဲကြော်နဲ့ ဆာကာကြီးကြော်က တူတူပဲလားဆိုတာ ခုထိ အဖြေမရသေးဘူး... တူတူပဲလား တိတိဆွိ? :D
မြသွေးနီ September 29, 2011 at 7:06 PM
မန္တလေးပဲကြော်ပူပူကို ငံပြာရည်တို့ပြီး ထမင်းကြမ်းလေးနဲ့ စားချင်တယ်။ ဆီထမင်းကတော့ အိုးကပ်ဂျိုးလေးတွေ ဖဲ့ဖဲ့စားချင်တာ..။
San San Htun September 30, 2011 at 12:12 PM
တီတီဆွိ စိတ်ကြီးတယ်နော်...ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး စားချင်တယ်..စားချင်တယ်..
စားချင်စရာကောင်းလိုက်တာ အန်တီလုပ်ထားပုံလေးက...နောက်ရက်မှ လုပ်စားမယ်..ကျေးဇူးပါအန်တီ...